Soso-kevitra sy fika |
Torohevitra famolavolana tontolon'ny PCB manan-danja 5 ho an'ny PCB Assembly
Torohevitra famolavolana tontonana 5 PCB manan-danja ho an'ny PCB Assembly Ao anatin'ny dingan'ny fivoriambe PCB dia mila ny milina SMT hametaka ireo singa ao amin'ny PCB isika. Saingy satria samy hafa ny haben'ny PCB, ny endriny na ny singa ao aminy, mba ahafahana mifanaraka tsara amin'ny fizotran'ny SMT, manatsara ny fahombiazana sy ny mena ...
Inona no tokony hataontsika alohan'ny SMT ny PCB mandritra ny dingan'ny fivoriambe PCB?
Inona no tokony hataontsika alohan'ny SMT ny PCB mandritra ny dingan'ny fivoriambe PCB? PCBFuture dia manana smt assembling factory, izay afaka manome serivisy fivorian'ny SMT ho an'ny fonosana kely indrindra 0201. Izy io dia fanohanana fomba fanodinana isan-karazany toy ny fivoriambe turnkey PCB sy serivisy pcba OEM. Ankehitriny, hanao intr ...
Ny tranga olana mahazatra momba ny famolavolana BGA ao amin'ny PCB / PCBA
Matetika isika dia mihaona amin'ny solosaina BGA mahantra amin'ny fizotry ny fizotran'ny fivorian'ny PCB noho ny famolavolana PCB tsy mety amin'ny asa. Noho izany, PCBFuture dia hanao famintinana sy fampidirana tranga marobe momba ny famolavolana mahazatra ary manantena aho fa afaka manome hevitra sarobidy ho an'ireo mpamorona PCB! Misy indrindra ny ...
Fenon'ny vakana vita amin'ny firaka amin'ny solaitrabe PCBA
Ny fenitra azo ekena ho an'ny haben'ny vakana vita amin'ny tinitra eo ambonin'ny birao PCBA. 1.Ny savaivon'ny baolina tin dia tsy mihoatra ny 0.13mm. 2.Ny isan'ny vakana varahina misy savaivony 0.05mm-0.13mm ao anatin'ny elanelana 600mm dia tsy mihoatra ny 5 (lafiny tokana). 3. Ny isan'ny vakana tinitra misy diamet ...
Ny fizotry ny famokarana PCB
PCBA dia manondro ny fizotry ny fametrahana, fampidirana ary fametahana singa PCB miteraka. Ny fizotry ny famokarana PCBA dia mila mandalo dingana maromaro hamita ny famokarana. Ankehitriny, PCBFuture dia hampahafantatra ireo fizotran'ny famokarana PCBA isan-karazany. Azo zaraina ny fizotry ny famokarana PCBA ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny mpanamboatra fivoriambe PCB?
Mpanjifa maro no tsy nahalala nisafidy rehefa mitady orinasa PCBA izy ireo. Betsaka ny ozinina fivoriambe PCB, ary toa tsy hitovizany izy ireo. Ka ahoana no ahitantsika ny orinasa PCBA mety? Tena zava-dehibe ny fisafidianana orinasa PCBA manana fahaiza-manao famokarana mety ...
Maninona no mifidy PCBFuture ho an'ny fivoriambe PCB Prototype
1. Fiantohana matanjaka atrikasa SMT: manana milina fametrahana sy fitaovana fanaraha-maso optika marobe izahay, izay afaka mamokatra teboka 4 tapitrisa isan'andro. Ny fizotrany tsirairay dia miaraka amin'ny mpiasan'ny QC mba hitazomana ny kalitaon'ny vokatra. Tsipika famokarana DIP: Misy milina fandefasana onja roa. ...
Iza no afaka manome serivisy PCB Assembly ho an'ny tabilao fanaraha-maso indostrialy
PCBFuture dia mpanamboatra PCBA OEM izay manome ny famokarana PCB matihanina, ny fividianana fitaovana, ny famokarana haingana PCBA ary ny serivisy avo lenta hafa miaraka amin'ny mpanjifa. Izy io dia afaka manome serivisy PCBA OEM ho an'ny tontonana fanaraha-maso indostrialy. Ny orinasa PCBA dia misy ny EMS sy ny OEM proce ...
Aiza no ahafahanao manafatra ilay prototype PCBA haingana
PCBFuture dia mpanamboatra fanodinana PCBA miaraka amin'ny orinasa birao PCB azy manokana ary ny orinasa chip SMT. Izy io dia afaka manome serivisy fanamarinana haingana PCBA ho an'ny mpanjifa. Ankehitriny, hampahafantariko ny fahaizan'ny PCBA fanaporofoana haingana sy ny fizotrany. Ny fahafaha-manaporofo haingana ny PCBA: PCBFuture dia manana singa matihanina 10 ...
Ahoana ny fomba hiantohana ireo singa elektronika tsy misy fotony
PCBFuture dia mpanamboatra PCBA matihanina izay afaka manome serivisy PCBA OEM toy ny fanamboarana PCB, fividianana singa, fanodinana chip SMT, fanodinana plug-in DIP, fanandramana fivoriambe, sns. original? Com ...
Mandra-pahoviana ny ora fanaterana aorian'ny nandidian'ny mpanjifa ny takelaka PCBA?
Ny fotoana fandefasana PCBA dia mifandray akaiky amin'ny asa mialoha. Mila manome ireto entana manaraka ireto aloha ny mpanjifa. Ireo entana dia azo ataterina ao anatin'ny 3 andro aorian'ny famenoana ny fitaovana rehetra. Raha misy ny fanodinana DIP dia maharitra 5-7 andro vao hatolotra. Raha manana baiko maika mety ...
Ahoana no ahafahan'ny orinasa mampihena ny vidin'ny fivorian'ny SMT
Amin'izao fotoana izao dia lasa orinasa mpamokatra orinasa manerantany i Shina. Ny fiatrehana ny fifaninanana amin'ny tsena, ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny vokatra, ny fihenan'ny vidin'ny vokatra, ny fanatsarana ny fahombiazana ary ny hanafohezana ny fotoana itarihana dia ampahany lehibe amin'ny fitantanana orinasa mpamokatra. SMT dia teknolojika fivorian'ny ...